Fedora 17 Beefy Miracle ကိုသွင်းပြီးနောက်ဘာလုပ်ရမလဲ Linux မှ
ရက်အနည်းငယ်နှောင်းပိုင်းနှင့်အတူ, နောက်ဆုံးတော့ ငါရောက်လာပြီ Fedora 17 ငါတို့လက်သို့
ဤ post installation လမ်းညွှန် အဘို့အစအ ဦး မှဖန်ဆင်းခဲ့သည် လူသစ် သူတို့သည်ဤလောကထဲ၌စတင်ရုံမျှမကပါ Fedora Linux ကို။
လှုပ်ရှားမှုများ> အက်ပလီကေးရှင်းများ> စနစ်ချိန်ညှိချက်များ> ဒေသနှင့်ဘာသာစကားသို့ သွား၍ စပိန်ဘာသာကိုရွေးပါ။
RPM Fusion သည် Fedora တွင်နောက်ထပ်အရေးကြီးသော (နှင့်ထပ်မံထည့်သွင်းရန်မဖြစ်မနေ) ဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် Red Hat သည်လိုင်စင်သို့မဟုတ်မူပိုင်ခွင့်အကြောင်းပြချက်များကြောင့် ၄ င်း၏ဖြန့်ဝေမှုများတွင်ပုံမှန်အားဖြင့်မပါ ၀ င်သောအထုပ်၏ကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပါ ၀ င်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် Fedora သည်၎င်းမှလုံးဝလွတ်လပ်ပြီးပြန်လည်ဖြန့်ဝေနိုင်စေရန်စီးပွားဖြစ်ကုဒ်နှင့်အကြောင်းအရာများအတွက်အခြားရွေးချယ်စရာများကိုအခမဲ့ကမ်းလှမ်းရန်ရည်ရွယ်ထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
RPM Fusion repository ကိုအခမဲ့နှင့်အခမဲ့မဟုတ်သောအခက်များဖြင့်ဖွင့်ပါ (အဆင့် ၃ ကိုကြည့်ပါ) ။
1. ရမှတ်များရှင်းလင်းပြီးသည်နှင့်ဤရွေးချယ်မှု ၃ ခုအနက်မှတစ်ခုကိုငါရွေးခဲ့သည်။
2. nouveau ကို initramfs ပုံတွင်ဖယ်ရှားပါ။
3. ကွန်ပျူတာကို Restart လုပ်ပါ။
အလုပ်အများစုအတွက်လုံလောက်သော OpenJDK၊ သို့သော်သင်သည် Java developer ဖြစ်ပါကတရားဝင်တရားဝင် Sun version ကို install လုပ်ရန်လိုပေမည်။
yum -y ကို java-1.7.0-openjdk ထည့်သွင်းပါ
yum -y ကို java-1.7.0-openjdk-plugin ကို install လုပ်ပါ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » FileLet ရဲ့ UseLinux » Fedora 17 Beefy Miracle ကိုတပ်ဆင်ပြီးနောက်ဘာလုပ်ရမည်နည်း
ယေရှဲ Corrales ဟုသူကပြောသည်
အကောင်းဆုံးလမ်းညွှန်! ငါလိုအပ်သမျှ what
Isaí Corrales ကိုပြန်ပြောပါ
Adan soler ဟုသူကပြောသည်
ကောင်းတဲ့သူငယ်ချင်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်! ဒါဟာကျွန်တော့်အတွက်အများကြီးအကျိုးရှိခဲ့တယ်၊ ငါဒီ linux လောကနဲ့စတာပါ
Adan Soler အားပြန်ကြားပါ
သင်လွယ်ကူပြီးမြန်ဆန်သောအရာတစ်ခုခုကိုလိုချင်လျှင်ဤ“ Fedora Utils” သည်အခြေခံလိုအပ်ချက်များနှင့်အသံနှင့်ဗီဒီယိုကုဒ်များအပြင် terminal မှအပို software များထည့်သွင်းရန်။
su -c «ဆံပင်ကောက်ကောက်
Fedorautils ကိုသွင်းပါ။ /etc/yum.repos.d/fedorautils.repo && yum »
သို့မဟုတ် * .rpm ကိုအသုံးပြုပါ http://fedorautils.sourceforge.net/
မင်္ဂလာပါ၊ ATI ယာဉ်မောင်းများအတွက်သင့်တွင်ထိုလမ်းညွှန်မရှိပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Federico bonino ဟုသူကပြောသည်
လမ်းညွှန်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်သည် Linux ကိုနှစ်လအသုံးပြုခဲ့သည်။ ဤစာမျက်နှာသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကူညီပေးသည်။ ဤအံ့ဖွယ်ကောင်းသော Linux အကြောင်းများစွာသင်ယူသည်။ Ubuntu ကိုနှစ်လကြာအသုံးပြုပြီးနောက် Fedora 17 သို့ kde နှင့်ပြောင်းခဲ့သည် အများကြီးပိုလို။ ၎င်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်ပြီးအလွန်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သော distro တစ်ခုဖြစ်သည်။ လမ်းညွှန်အတွက်နှင့်အကောင်းဆုံးသောစာမျက်နှာအတွက်သင့်ကိုအလွန်ကျေးဇူးတင်ပါသည်
federico bonino သို့ပြန်သွားရန်
မင်းအတွက်အသုံးဝင်တာကိုငါ ၀ မ်းသာတယ်။
ဒါကောင်းတယ် ဖက်သည်! ရှင်ပေါလု။
ခဏကြာရင်ဒီကြီးကြီးမားမား distro ကိုကျွန်တော် install လုပ်ပြီးသွားပြီ။ မင်းရဲ့လမ်းညွှန်ကငါ့ကိုလက်အိတ်လို😉ပွေ့ဖက်လိုက်တယ် !!
nvidia driver Installation အလုပ်မလုပ်ပါဘူး၊ ဘာမကောင်းလဲဆိုတော့ကိုယ်တိုင်လုပ်ရမှာပဲ
ရိုးရှင်းစွာအ Fedora မှအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့လမ်းညွှန်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်! ဖက်သည်! ရှင်ပေါလု။
Saito Mordraug ဟုသူကပြောသည်
အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့လမ်းညွှန်: တိုတိုနှင့်အလွန်အထောက်အကူဖြစ်စေ (ကောင်းမွန်သောလမ်းညွှန်များကဲ့သို့) ။
သင် 10 up တက်လက်မှတ်ထိုးခဲ့သည်
Ariel Escobar လိုပက်ဇ် ဟုသူကပြောသည်
အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့လမ်းညွှန်၊ Fedora 17 ကိုစိတ်ပျက်စေခဲ့တဲ့တစ်ခုတည်းသောအရာက ipod touch သည်ငါ့ကိုအသိအမှတ်မပြုခြင်းဖြစ်သည်
Ariel Escobar Lópezအားပြန်ပြောပါ
Arturo Osorio ဟုသူကပြောသည်
Arturo Osorio သို့ပြန်သွားပါ
လမ်းညွှန်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်ကိစ္စတွင်အမှန်တရားမှာကျွန်ုပ်သည် Fedora 17 နှင့်အလွန်ကျေနပ်သည်၊ အလွန်မြန်။ အလွန်တည်ငြိမ်သည်။ ကျွန်တော့်ကိစ္စမှာ Nvidia ကို install လုပ်စရာမလိုပါဘူး။ Monorors နှစ်ခုစလုံးအပိုလုပ်ဆောင်စရာမလိုဘဲလည်ပတ်နေပါတယ်။ Salu2 ။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ် java ကို install လုပ်ရန်ကြိုးစားသော်လည်း၎င်းသည်၎င်းကို၎င်း၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းတွင်ထည့်သွင်းထားကြောင်းပြသခဲ့သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည် java plugin လိုအပ်သော application ကိုဖွင့်သောအခါ java plugin ကိုတပ်ဆင်။ မရသေးကြောင်း ထပ်မံ၍ ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်နိုင်သနည်း။
Jenrry Soto Dextre ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါမိတ်ဆွေနှင့် enrgia ၏စားသုံးမှုမှာသင်တစ်ခုခုရှိလို့ fedora 17 ကို gnome shell နှင့်အတူ fedora 3, ငါ့ကိုသုံးနာရီလောက်ကြာရှည်စွာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Jenrry Soto Dextre အားပြန်ပြောပါ
အကယ်၍ သင်၏မော်နီတာက၎င်းကို LVSD1 ဟု terminal ထဲ၌ root အဖြစ်ထည့်သွင်းဖော်ပြပါကသင်၏ laptop ၏အရောင်ကိုစီမံနိုင်သည်။ xrandr –output LVDS1 –brightness 0.5 ။ 0.5 သည် screen brightness level ဖြစ်သည်။
မင်္ဂလာပါသူငယ်ချင်းများ၊ ကျွန်ုပ်ဒီကို install လုပ်ပြီးပါက၊ ကျွန်ုပ်သည်တစ်ခုခုကိုတပ်ဆင်သောအခါ၎င်းသည်မတည်ရှိပါဟုအဆုံးတွင်ပြောသောအခါ၎င်းသည်ကျွန်တော့်ကိုအာဂျင်တီးနားနှင့်ဘရာဇီးလ်တို့၏ဆာဗာများနှင့်ချိတ်ဆက် yum-plugin-fastestmirror yum-presto yum-langpacks
Gustavo Nunez ဟုသူကပြောသည်
ကောင်းမွန်သောဘလော့ဂ်၊ အကယ်၍ သင့်တွင် tools များ (သို့) စိတ် ၀ င်စားစရာ link များပိုရှိပါကသင်ထုတ်ဝေလျှင်ကျွန်ုပ်သူတို့ကိုကျေးဇူးတင်မည်
ငါ Fedora 17 Beefy Miracle update ကို install လုပ်ပြီးစက်က reboot လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာ video driver မတင်ပေးပါဘူး။ မဆိုအကြံပြုချက်?
César Gabriel Guaimás Rosado ဟုသူကပြောသည်
အလွန်ကောင်းတဲ့သင်ခန်းစာ !!! ကျေးဇူးတင်ပါတယ်: D!
César Gabriel Guaimás Rosado သို့ပြန်သွားပါ
ဟိုဆေး Miguel Morales Martinez ဟုသူကပြောသည်
ATI driver တပ်ဆင်ခြင်းဖြင့်သင်၏ပို့စ်ကိုတိုးချဲ့။ မရပါလားကျွန်ုပ်၏ ATI စာမျက်နှာမှဒေါင်းလုပ်လုပ်ထားသောဒရိုင်ဘာများကိုကျွန်ုပ်တင်လိုက်သောအခါ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏စနစ်ကိုချိုးဖောက်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်မတတ်နိုင်ပါ။
José Miguel Morales Martínezအားပြန်ပြောပါ
အိုင်ဗင် Reyes ဟုသူကပြောသည်
ငါ yum -y update ကို run သောအခါငါအဘယ်ကြောင့်မသိရပါဘူး။
Ivan Reyes ကိုပြန်သွားပါ
ကျနော်တို့သူတို့ကိုထုတ်ဝေပါလိမ့်မယ် ... 🙂